Ibhizinisi, Ukuhlela amasu
Ukuhlelela Enterprise ithatha isikhundla ebalulekile emgqeni yentuthuko kwebhizinisi ezimweni ezimakethe. Ngosizo uhlelo eyodwa exhumene izithakazelo zezwe isimo nezomnotho amabhizinisi ethile. Ukuhlela kuhloswe ukuthuthukiswa izinqubo zokukhiqiza kanye nokwanda inzuzo (imali) ibhizinisi.
Enterprises kanye isimo endaweni umnotho emakethe yizindaba esizimele umsebenzi yezimboni nezomnotho. Ngakho-ke, sihlelela yezinkampani zikahulumeni mthethonqubo ayengumlamuleli waso indlela yokundlelana kwezomnotho esekelwe ubudlelwane emakethe ukuze kwaneliswe isidingo iyona zilingana. Imfundiso yokuziphendukela zezimboni ukuhlela ukuthuthukiswa kwamabhizinisi kusekelwe ibhalansi kwaneliswe isidingo.
Ukuhlelela Enterprise izenzo njengengxenye emkhathini emakethe ngesimo samoregulyatora zako ezisemqoka. Kunenkolelo ngokuhlanganyela wesayensi ezifana ukukhiqizwa, ukumaketha, ukuphathwa kanye nabanye.
Into eyinhloko ukuhlelwa ngesikhathi ibhizinisi - iyona nokuxhumana bekuhlela ne yizinkomba zezomnotho, ukusatshalaliswa, futhi ukusetshenziswa kwemithombo kanye emphahleni. Okwamanje, bonke izinhlangano ibhizinisi ngokuzimela ukuhlela imisebenzi zabo zezomnotho ukunquma ikusasa nentuthuko.
Kukhona izinhlelo eziningana (izinhlobo) ukuhlela ngesikhathi ibhizinisi.
Zezinto eziphathekayo ezenziwe ukuhlela ngesikhathi ibhizinisi kunqunywa ukuthuthukiswa kohlelo izinkomba komnotho kanye nobuchwepheshe amabhizinisi ebunyeni isikhathi nendawo. Kulesi sici, axazulule amavolumu ukukhiqizwa esizayo, imithombo akhethiwe, usungula imithetho yokusetshenziswa yabo, kuhlelwa yokugcina izinkomba ezezimali nezomnotho.
ukuhlela Operational and ukukhiqizwa ephawula ukuqhubeka futhi kwaqedwa kuhlelwe abheke ukuthi kungenzeka izinhlelo. Kule ndaba, okuhlosiwe ukukhiqizwa setha izitolo nasezindaweni zokusebenza, kuyalungiswa inqubo ukukhiqizwa, njll
Zonke izinhlobo ukuhlela kungenziwa ihlelwe ku izici eziyisisekelo ezifana ezingeni lokuphatha, okuqukethwe amasu, zokutadisha, ububanzi, ubude besikhathi, degree of ngokunemba, komqondo nezinga lokukhula kwengane kanye nabanye.
Ngaphezu kwalezi kukhona izinhlobo ezinjalo ukuhlela izimo zenhlalo yomphakathi zabasebenzi, izinhlangano, zobuchwepheshe, zezimali, utshalomali, ukuhlelelwa kwebhizinisi, ukuthengisela nokumaketha, nabanye, okuyinto kunqunywa izinhlobo izinhlelo. Ngayinye yalezi inikeza uhlelo lwayo izinkomba esibonisa isikhathi ukusebenza, uhlobo oluthile imisebenzi, Lesisemkhatsini izinkomba sokugcina.
Kuye ezingeni lokuphatha zihlukaniswa yenkampani, ibhizinisi, imboni, workshop, izimboni nezinye izinhlobo ukuhlela.
Ngu indlela yokuhlela emakethe ukulungisiswa ukukhululwa (e ezimbonini ezizimele), kukhombisa (isimo ukulawulwa amanani, amanani, amanani, per cent) kanye nokuphathwa emaphakathi noma (e bezinhlangano eziphethwe uhulumeni).
Ngesikhathi luhlelo lwekusebenta kungaba yesikhathi esifushane (okuthiwa wamanje), eliphakathi (noma yonyaka), yesikhathi eside (ngombono).
Kuye esiteji yohlelo lokuthuthukisa kuyinto yokuqala kanye esichazayo. Ngokwe-degree lokunemba - lakhuliswa futhi olusha.
Kuye imigomo esungulwe, ukwaba nokuhlela ukusebenza, Tactical futhi ukuhlela amasu ka inkampani.
Wasebenza ukukhetha yokuxazulula imisebenzi. Tactical sasifana nokuthi Ukulungisiswa imisebenzi izinto ezidingekayo ukuze sifeze izinhloso. Kuhlanganisa ukukhetha amasu ka izindlela, emigomweni ukubhekana nezinkinga ezithile ukuthuthukiswa kwamabhizinisi, kanye balungisiswe. nezinhlelo kungenzeka ukukhula komnotho, ukuthuthukiswa komuntu, ukufinyelela ezingeni emhlabeni, njll
ukuhlela lwezezimali ngesikhathi ibhizinisi ihlanganisa izici ezezimali nezomnotho umsebenzi, ukuhlinzeka ukulawula ukwakheka kanye ukusetshenziswa impahla, zezimali kanye nokuphathwa kwabasebenzi. Kuyadingeka ukuba uqinise ukusebenza kwezimali kanye ukuzimela kwenkampani.
Ukwakha uhlelo inethiwekhi: isibonelo. Imodeli yenqubo ukukhiqizwa
Ukugeza kwezimoto: uhlelo lwebhizinisi luzosiza ekuvuleni
Coffee shop business plan. Indlela yokuvula esitolo ikhofi: izibalo kanye nezeluleko osomabhizinisi yimpumelelo
Recreation Centre "Malinka" (Volgodonsk): incazelo, amanani, ukubuyekezwa
Kwesidakisi ngezibuyekezo 'Colm'
Dzhi Dao patch Chinese sikashukela: ukubuyekezwa odokotela, ukusetshenziswa kanye nempumelelo